Izipho Ezinkulu Nezokuphepha - BullyingCanada
Izipho Ezinkulu & Izibambiso
Ukushiya Ifa Elikhumbulekayo
Ungaba nomthelela omkhulu kanjani empilweni yengqondo yezingane ezixhashazwayo
Ungathinta ngokushesha impilo yengqondo yentsha emphakathini wakini naseCanada yonkana ngokwenza umnikelo obalulekile kuwo BullyingCanada.
BullyingCanada ithembele kumnikelo womuntu ngamunye, womphakathi, wesisekelo kanye nowezinkampani ukuze uthole uxhaso lwethu oluningi. Izipho ezinkulu zidlala indima ebalulekile ekusimamiseni izinsizakalo zethu zokweseka ezingu-24/7 zezingane ezihlukumezekile, kanye nezethulo zethu ezifundisayo eziphathelene nobuxhwanguxhwangu ezikoleni, ezindaweni zokusebenza, nasezikhungweni zomphakathi. Ukupha kwakho okuvelele kuzosisiza ukuthi sihambisane nenani elikhulayo lezingane ezifinyelela kithi ukuze zithole usizo futhi sithuthukise ulwazi nezinsiza esingabanika zona ku-inthanethi ngezilimi ezingu-104.
Ungaba nomthelela osindisa ukuphila entsheni exhashazwayo ngokunikela ngokwazisa izibambiso ezithengiswa esidlangalaleni. Ngokwenza kanjalo, uzozuza futhi ngokungakhokhi intela yenzuzo enkulu esiphweni sakho. Ukuze uzuze kulokhu kukhululwa enteleni, umnikelo wakho kufanele wenziwe ngendlela ethile. Sicela ulande eyethu Iphepha Leqiniso Lesipho Sezibambiso ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, noma usithinte njengoba kushiwo ngezansi.
Uma unentshisekelo ethile ku BullyingCanadaemsebenzini, siyakwamukela ukukhuluma nawe mayelana nokuthi ungathanda isipho sakho sibe namuphi umthelela. Futhi singakunikeza ukuqashelwa komphakathi ngokusekela kwakho, uma ufisa. Ukusivumela ukuthi sikubonge esidlangalaleni kungakhuthaza abanye ukuthi benze okufanayo!
Sicela usishayele ku-(877) 352-4497 noma nge-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]
Sihlonipha abalandeli bethu abaphanayo kakhulu
Sikweleta isikweletu sokubonga ngalaba bantu abanakekelayo, amabhizinisi, izisekelo nezinhlangano !
Khumbula uzwela lwakho ngentsha exhashazwayo, futhi usekele izingane ezisengozini ezizukulwaneni ngezizukulwane!
Yaziwa njengesakhamuzi esihle esiyinkampani!
Guqula imoto yakho ongayifunayo ibe ukwesekwa okusindisa bukhoma!
Ukusisekela ngokuqongelela izimali kungaba lula futhi kujabulise!
Gcina usesikhathini nge BullyingCanada
(866) 780-3592 ifeksi
Inqubomgomo yobumfihlo | Imigomo Yokusebenzisa | Ikhithi yemidiya nomhlahlandlela womkhiqizo
© Copyright 2006-2022. BullyingCanada, Inc. Wonke Amalungelo Agodliwe. | Inombolo Yokubhalisa Yenhlangano: 82991 7897 RR0001.